Polynesia, yakawanda kwazvo kupfuura inoyevedza mahombekombe uye akadzikama makungwa | Absolut Kufamba
Polynesia izita rinosanganisa nzvimbo hombe yepasi redu rakabatanidzwa Oceania. Nekudaro, mune yakafara pfungwa, iyo inotangira kubva Hawaii kusvikira Easter Island. Pakazara, pane akawanda ezvitsuwa akapararira pamusoro peiyo Pacific Ocean izvo ndezvenyika dzakasiyana.
Pakati pevanozvimiririra pane Samoa, Tuvalu, New Zealand, Kirivati o Tonga. Kune avo chikamu, zvimwe zviwi ndezva United States senge yeaHawaii, ku France sekudana French polynesia kana kuti United Kingdom s Zvitsuwa Pitikeni. Asi nzvimbo dzese idzi dzinogovana tsika dzekare, nzvimbo dzinoyevedza uye mahombekombe eparadhiso. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvePolynesia, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Chii chekuona nekuita muPolynesia
1.1 Hawaii, gedhi rekumadokero kuenda kuPolynesia
1.2 Cook Islands, yakachena Polynesian essence
1.3 Las Marianas, yaimbova yeSpanish
1.4 Kiribati, iyo republic inotanga gore
1.5 French Polynesia, magineti ekushanya
1.5.1 Tahiti neSosaiti Islands
1.5.2 Zvitsuwa zveMarquesas, zvakakura kwazvo muFrench Polynesia
1.5.3 Easter Island, kupedzisa rwendo rwedu rwePolynesia
Chii chekuona nekuita muPolynesia
Zvingave zvisingaite kwatiri kuti tikutsanangurire mune imwe chete chinyorwa zvese zvaunogona kuita muPolynesia zvichipa kukura kwayo kukuru uye kusiyana. Neichi chikonzero, isu ticha tarisa pane dzimwe dzayo nzvimbo dzakanakisa uyezve zvakanakisa kugadzirirwa kuti ugamuchire iwe semufambi.
Hawaii, gedhi rekumadokero kuenda kuPolynesia
Kungokuudza iwe nezve zvese zvinofanirwa kupihwa neHawaii, tinoda zvinopfuura chinyorwa chimwe chete. Nekuti inoumbwa nezvitsuwa zvipfumbamwe, zviwi zviwande uye zvakare zvitsuwa. Oahu Iyo ndiyo inogara dzimba huru yenyika, Honolulu, uye zvakare kune kunozivikanwa Pearl Harbor magungwa base. Ndizvo, Musoro wedhaimani and the waikiki beach inzvimbo dzayo dzinozivikanwa kwazvo. Asi iwe unogona zvakare kushanyira nzvimbo dzinoyevedza senge Amy BH Greenwell Ethnobotanical Bindu.
Ukuwo, Kauai, inozivikanwa se «Bindu chitsuwa»Iyo iri yekumaodzanyemba kwechitsuwa uye zvakare imwe yeakanyanya kunaka. Nemavara egirini uye anofara, nzvimbo senge Na Pali gungwa, ine mawere ayo anoyevedza, kana iyo Waimea Grand Canyon.
Uyewo maui Iyo inofanirwa kuona muHawaii. Kufanana neyekare, chitsuwa ichi chinokupa iwe nharaunda dzemarudzi ese. Asi mahombekombe ayo anoshamisa anoratidzika. Uye, pamusoro pezvose, inozivikanwa mugwagwa unoenda Hana, anenge zana makiromita anomhanya kuburikidza nechikamu charo kuchamhembe kwakadziva kumadokero, kuyambuka mapopoma, nzizi, mabhiriji uye mawere. Uye haufanire kupotsa Maui kubuda kwezuva pamusoro pe Haleakala gomo, ine toni dzegoridhe dzinoyevedza.
Chekupedzisira, chitsuwa chechina chaunofanira kushanyira ndicho chinonzi, chaizvo Chitsuwa Chikuru. Pamwe zvinokuyeuchidza chimwe chinhu cheLanzarote. Nekuti iyo Volcanoes National Park, neKilauea, Mauna Kea neMauna Loa, mamwe acho achiri kudzinga kuyerera kwemvura.
Cook Islands, yakachena Polynesian essence
Ichi chitsuwa, nyika inosangana ne New Zealand, inosanganisira zviwi zvakapararira pamusoro pemamirioni maviri emakiromita emakiromita muSouth Pacific Ocean, izvo zvinokupa iwe pfungwa yezvose zvayinofanira kupa.
Rarotonga dzimba dzimbahwe, rine zita Avarua, uye iwe uchawana mairi mamiriro azvino uye ekumadokero. Nekudaro, iyo zvakare inokupa iwe kukosha kwePolynesia munzvimbo senge Punanga Nui musika, uko ukule, sarongs uye zvakajairika gastronomy yakawandisa. Semuenzaniso, marinated hove mbishi kana ika kuuraya uye yakabikwa taro mashizha kana rukau.
Chitsuwa chechipiri chinotarisisa cheCook chiri Aituaki, zvakare imwe yeakanaka kwazvo nemugungwa waro wemukati wakakomberedzwa nemakorari nemakungwa eparadhiso. Atiu Iyo zvakare yakakomberedzwa nematombo, asi iwe unogona zvakare kuburukira pairi kune inoyevedza Anatakitaki bako uye unocherekedza shiri dzinoshamisa.
Kune iro chikamu, chitsuwa che Vakafa yakakwana kune scuba diving munzvimbo dzakaita seBlack Rock kana Matavera. Y Mangaia Iyo ndiyo inokatyamadza kupfuura zvese, nekuti chimiro chayo chakagadzirwa nekiringi ringi ine nhanho mbiri dzinovanza hombe huru yemakomo pasi petsoka Rangimotia massif.
Gungwa muzvitsuwa zvinobika
Las Marianas, yaimbova yeSpanish
Haasi munhu wese anoziva kuti ichi chitsuwa chaive chake España kusvikira pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX. Naizvozvo, ine zvinopfuura kamwe kushamisika zvakachengeterwa iwe. Semuenzaniso, iye Mutauro wechiChamorro, ine fanano huru neSpanish. Ichokwadi, zita rayo pacharo ndiro "Mariano".
Akanaka kwazvo eMariana anogona kunge ari Rota, inonziwo "Chitsuwa chine rugare" yenharaunda yayo izere nemapurazi madiki uye zvakasikwa. Asi chakanyanya kuzivikanwa ndeche Saipan, iko iyo Grotto, hombe huru yemumvura yemumatombo inokwezva vakasiyana kubva kumativi ese epasi. Asi, Tinian Izvo zvakare zvinokupa iwe zvakasarudzika zvishamiso asiwo zvakare akawanda akasiya WWII mauto kuisirwa.
MaSouth Mariana ane danda ravo rekukwezva chitsuwa che Guam. Iyo imba kune zvishamiso senge zvisikwa kuchengetedzwa kwe Ritidian Point, ine mahombekombe ayo anoshamisa, uye talofofo inowira. Pasina kukanganwa cosmopolitanism ye Tumon Bay kana iyo inoyevedza yakavhurika miziyamu iyo inoita iyo Pacific Hondo Yenyika Nhoroondo Park.
Guta guru reGuam ndizvo Kubiridzira, kwaunenge uine zvimwe zvipfeko zveSpanish senge Cathedral Basilica yeZita Rakanaka raMariya, iyo iri, chaizvo, padyo nePaza de España. Asi iro rine vanhu vazhinji guta iri Dededo, iri pabani rekorari kuchamhembe kwechitsuwa.
Kiribati, iyo republic inotanga gore
Inowanikwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwe Ositireriya, inyika yakazvimiririra inoumbwa nemapoka akati wandei ezvitsuwa nemaatoll. Pakati pekutanga pane Tarawa y iyo Gilbert, Ellice, La Línea uye Fénix zvitsuwa. Nezve masekondi, Kiritimati kana Krisimasi chitsuwa Iyi ndiyo nzvimbo yekutanga kupemberera gore idzva uye nzvimbo yechokwadi yekunamatira kune vakasiyana uye vabati vehove.
Kiribati ingangove imwe yenzvimbo muPolynesia yakanyatso chengetedza iyo zvetsika hupenyu. Vagari vayo vanogara zvakanyanya mumatumba emapuranga uye vanodya macoconut, chingwa chechingwa nehove. Unogona kuzviona, kunyanya kana iwe ukashanyira zviwi zviri kure kwazvo.
Guta guru renyika ino inoda kuziva iri Maodzanyemba Tarawa, rakaumbwa sechanza chenyika pakati pePacific Ocean uye nemukati megungwa. Anonzi Ambo, kunyangwe iro rakakosha guta iri Bairiki, iripi paramende.
French Polynesia, magineti ekushanya
Kunyangwe zvese zvatakatsanangurira iwe, pamwe nzvimbo yenzvimbo ino inonyanya kuzivikanwa nekushanyirwa kwepasi rose inonzi French Polynesia. Iyo inoumbwa nezana zana negumi nesere zvitsuwa uye akati wandei maatoll ayo akaiswa mumapoka mashanu ezvitsuwa. Asi isu tichaenda kukuratidza iyo inonakidza kwazvo.
Tahiti neSosaiti Islands
Tahiti inofanirwa kuona kana uri kuenda kuFrench Polynesia. Ndicho chitsuwa chikuru mu Social archipelago, iyo zvakare yakakamurwa kuita zvitsuwa zveBarlovento neSotavento. Kune vekutanga, kuwedzera kuTahiti pachayo, Tetiaroa o Moorea, nepo yekupedzisira ichiumbwa Huaine, tupai kana, inonyanya kuzivikanwa nekukosha kwayo kwevashanyi, Bora Bora.
Chaizvo izvo zvekupedzisira zvinonyanya kushanyirwa kupfuura Tahiti, kazhinji zvinodzoserwa kunzvimbo yekupfuura. Zvisinei, uku kukanganisa kukuru. Tinokukurudzira kuti upedze mazuva mashoma uchiziva Tahiti nekuti ine zvakawanda zvekukupa.
Guta rayo guru ndere Papeete, kwaunogona kushanyira kereke huru uye, pamusoro pezvose, misika yayo. Pakati pekupedzisira, zvinoda kuziva iyo ine maparera. Asi, kana iwe uchida kunzwa kufema kwechitsuwa, iwe zvirinani kushanya chikafu. Uye, kana iwe uchiri kuda kudzika yakawanda yetsika dzePolynesia, tinokurudzira iyo Museum yeTahiti neIzviwi.
Iwe unofanirwa zvakare kutora nzendo kuburikidza nemukati mechitsuwa, kwaunowana mamwe mashura enzvimbo senge Papenoo mupata, iyo inotungamira kutembere ye Mari zvakare, nzvimbo inoyera yevagari veko. Kana izvo zve mount aorai, kubva mauri uine anoshamisa maonero echitsuwa.
Kune rimwe divi, kana iwe uchida gungwa, iwe unofanirwa kufamba kuchamhembe kwakadziva kumadokero, izvo zvinokutora iwe kuenda kumahombekombe anokatyamadza senge e Tautira uye, pamusoro pezvose, izvo zve Teahupo'o, inozivikanwa nekuve nerimwe remafungu anoshamisa kwazvo pasi.
Kana iwe uchifarira zvekuchera matongo, iwe unofanirwa kushanyira iyo marae yechitsuwa. Idzi inzvimbo dzinoyera idzo muhupenyu husati hwava kumadokero hwaive nemhemberero. Sezvineiwo, semasaiti enzvimbo dzechitendero chedu Iron Iron kana Bronze Age, ivo vakaganhurwa nematombo.
Pakupedzisira, pachitsuwa chiri pedyo che Moorea Zvinoshamisa kushamisika zvakakumirira. Kubva kuTahiti inosvikika zviri nyore nechikepe kana ndege uye haugone kupotsa iyo gomo Rotui, chimwe chezvinhu zvinonyanya kushamisa muPolynesia yose; zvinoorora kubika bay kana whale kuona, zvakajairika pamiganhu yayo.
Zvitsuwa zveMarquesas, zvakakura kwazvo muFrench Polynesia
Iwo ndiwo makuru ezvitsuwa pane ese ayo anoumba French Polynesia. Ivo vakaiswa mukati Washington zviwi, all Chimurenga and the naMendaña. Vapashure vane zita ravo kune wese akavawana muna 1595: muSpanish Álvaro de Mendaña, uyo akavabhabhatidza sa Marquesas Islands yeMendoza mukuremekedza uyo panguva iyoyo aive gavhuna wePeru.
Kunyangwe iwe usati wavashanyira, ivo vanozojairana newe nekuti iwo ndiwo marongero emamwe mabhuku enganonyorwa na Herman melville uye nekuve kwave kuri kupenda Paul gaugin. Chitsuwa chikuru pane izvi Nuku hiva, kune guta guru, Taiohane.
Nekudaro, iyo Marquesas yakave nekubudirira kushoma kwevashanyi kupfuura vamwe muPolynesia. Nekuda kweizvi, ivo vakachengetedza mazhinji ematunhu emhandara kusvika nhasi. Nezvehunhu hwayo, haina chekuita nemadziva akadzikama ane turquoise bhuruu mvura ye, semuenzaniso Bora Bora. MaMarquesas inzvimbo dzine makomo uye dzakakombama, nehuswa hwakasvibira uye mawere emahombekombe anoguma mumhenderekedzo dzejecha dema.
Hiva Oa, muMarquesas Islands
Zvichida kusavapo kwekushanya kwakawanda kwakatungamirawo kuvagari veMarquesas kuve vakachengetedza matunhu avo zvirinani kune mamwe matunhu. tsika dze polynesian. Iyo inzvimbo yakakwana kuti iwe uone iyo haka kana mitambo yemitambo uye kuitira kuti iwe uzive hunyanzvi hwavo uye ushanyire zvisaririra zvavo zvekuchera matongo. Kunyanya kuda kuziva kwavo tiki, zvimwe zvidhori zvihombe zvakaumbwa nevanhu zvinogona kunge zvine hukama neiyo moai kubva kuEaster Island.
Chekupedzisira, anenge makiromita makumi matatu kubva kuNuku Hiva une chitsuwa che Ua Pou, uko kunoshamisa mbiru dzebasaltic yehurefu hwakaipisisa iyo inopa icho chinhu chechakavanzika.
Easter Island, kupedzisa rwendo rwedu rwePolynesia
Rapa Nui kana Easter Island ingangodaro iri imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi muPolynesia. Naizvozvo, hapana chinhu chiri nani pane kupedzisa kushanya kwedu kwenzvimbo ino yenzvimbo uko.
Yakarasika muPacific Ocean, anenge zviuru zvina zvemakiromita kubva kuAmerican continent uye sevakawanda kubva kuTahiti, kana zvishamiso Tinotaura, Rapa Nui anazvo zvese. Pasi rose rinozivikanwa nderayo moai, izvo zvifananidzo zvakasarudzika zvinobereka misoro yevanhu.
Kana vagari vayo vekare vakasvika pachitsuwa ichi chakarasika uye nemagadzirirwo azvakaitwa zvinhu zvikuru hazvizivikanwe Asi zvinozivikanwa kuti vaive nemitambo yakafanana neiyo ya shiri-murume uye kuti ivo vakagadzira chinyorwa che hieroglyphic chinonzi rongo rongo. Izvo zvinofungidzirwawo kuti moai dzakamira kuvakwa kutenderedza zana ramakore rechi XNUMX. Zvisinei, chitsuwa chose chakazara navo, kwete kungomira, vazhinji vakarara nekuti vakapedzisira vadonha. Asi nzvimbo dzakanakisa dzekuvaona ndidzo rano raraku, Tongariki o Ahu akivi. Mune yekupedzisira, zviratidziro zvakare zvine hunhu hwekutarisa pagungwa.
Moai paIsita Island
Asi izvi hazvisi izvo chete zvinokwezva paEaster Island. Isu tinokukurudzirawo kuti uone musha wemhemberero we Orongo, uko, sezviri pachena, madzimambo akasarudzwa uye ayo ane mamwe asinganzwisisike petroglyphs; inokosha Anakena gungwa uyezve, Hanga Roa, iro guta diki rechitsuwa, mune ani chechi yemuchinjikwa mutsvene iwe unogona kuona akati wandei masvomhu evatsvene vechiKristu asi akavezwa musita yavo yega moai.
Mukupedzisa, tinopedzisa pano rwendo rwatafungira kwauri kuburikidza ne Polynesia. Isu takakuudza nezve dzimwe nzvimbo dzayo dzakanakisa. Asi iwe unogona zvakare kusarudza kuita rwendo rwako kune vamwe vakaita seiyo Humambo hweTonga, kwaunogona kuona iyo trilito yeHa'amonga'aanozivikanwa se "The Stonehenge rePolynesia"; Tuvalu, uko kwavanemutambo wavo chaiwo, iyo Ndinokusuwa, kana dzakakurumbira Zvitsuwa zveFiji. Hapana kana imwe yenzvimbo idzi inokuodza moyo kana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Polynesia
Yakareba rwizi munyika